Isiqendu esongezelelweyo seNtsomi yokuFunwa: Isidlo seRaven ngaphambi kwenkulumbuso yexesha lesibini | Ndisuka mac
UManuel Alonso | 07/04/2021 20:00 | Apple TV
Siza kubona ukuba ivula njani ixesha lesibini ukusuka kuthotho lwantlandlolo lweApple TV + Ukufuna intsomi: IRaven's Banquet kunye neApple ziyasothusa Isahluko esongezelelweyo eziza kubakho phambi kwale premiere. Le manqaku, adunyiswe kakhulu luluntu, ifuna ukubulela bonke abalandeli ngokwamkelwa kakuhle kwemveliso.
I-Apple TV + ilungiselela isiqendu esongezelelweyo seNtsomi yokufuna. Isiqendu «Everlight» Inkulumbuso ngo-Epreli 16 kwiqonga lokusasaza, emva kwesiqendu esikhethekileyo soluhlu losasazo kunyaka ophelileyo, phantsi kwesihloko soQinisekiso. Eli nqaku liza kusibonisa iqela le-Mythic Quest elibuyela emsebenzini emva kobhubhane we-coronavirus kwitheko labo lonyaka le-Everlight. UMcElhenney uthe malunga noku:
Ukukhanya sisiqendu esikhethekileyo esithetha ngobunzima obubonakalayo kunye neemvakalelo zokubuyela esiqhelweni. Uzele lithemba, uvuyo kunye nethemba ngekamva eliqaqambileyo. Phambi kwexesha lethu lesibini elizayo, saziva iyindlela efanelekileyo (kunye nexesha elifanelekileyo) lokumema abaphulaphuli babuyele kwilizwe lokuKhangela kweNtsomi.
Ixesha lesibini liya kukhutshwa ngoMeyi 7 kwaye besesikuxelele ngayo. Ixesha elizele kukufika okutsha ngabadlali abaphambili bale ngqungquthela ye-Apple TV +, njengoko besesitshilo ngaphambili, yamkelwe kakuhle ngabaphulaphuli. Ayisiyonto ingaphantsi, ukubona ihambo kunye nokungalunganga kwabalinganiswa bayo. Emva kokuvalelwa yedwa okugqitywe ngulo bhubhane, phantse wonke umntu ubuyile eofisini ngoku, ezama ukwakha kwimpumelelo yeSidlo seRaven ngokusungula ulwandiso olutsha lweengqungquthela.
Ixesha liza kuba malunga izihloko ezilandelayo wabalinganiswa bethu abaphambili. U-Ian (uRob McElhenney) kunye nomlawuli osandula ukukhuthazwa wobuchule uPoppy (uCharlotte Nicdao) uyasokola kwicala lomdlalo. Okwangoku, i-CW (F. Murray Abraham) idibanisa imicimbi engasonjululwanga kwixesha lakhe elidlulileyo. Abavavanyi (u-Ashly Burch kunye no-Imani Hakim) bazakuzama ukufumanisa ukuba yeyiphi imingcele yokuthandana eofisini, kwaye uDavid (David Hornsby) unethamsanqa elibi kwabasetyhini kwakhona, ngeli xesha noJo (Jessie Ennis) bamshiya ukuba ancede. UBrad (uDanny Pudi).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » Ukufuna intsomi: Isiqendu sebhonasi seRaven's Banquet ngaphambi kwexesha le-XNUMX iphambili